Phakamisa abavelisi betafile kunye nabaxhasi | China Phakamisa Itafile yeFektri
Phakamisa Itafile Izixhobo zokugcina impahla ziyimveliso ebalulekileyo kwindawo yokugcina izinto ebonisa ishishini eDaxlifter.Qingdao Daxlifter yophando kunye nokuphuhlisa itafile yokuphakamisa isikere, uhlobo lwesikere pallet, udidi lwesikere sombane kunye nelokulawula iplagi pallet njalo njalo, ngeli xesha unikezela ngesiko elenziweyo inkonzo kubathengi bethu betafile yesikere njl.
I-China E imilo ye-Scissor Lift Table ihlala isebenzisa umsebenzi wokuphatha iipallet ekufuneka isetyenzisiwe Itheyibhile yokuphakamisa itafile uyiphakamise, emva koko usebenzise ifolokhwe yokuhambisa ipallet kwisikhongozeli okanye kwiloli. base kwimfuno yakho
I-Daxlifter Low Profile Scissor Phakamisa uyilo lwetheyibhile yokukhuphela kunye nokulayisha iimpahla okanye ipallet ngaphakathi nakwilori yethu okanye abanye. Iqonga le-Ultralow lenza ilori ye-pallet okanye ezinye izixhobo zokugcina u-wotk zinokulula ukuhambisa iimpahla okanye ipallet.
Songeze iqonga eliqengqelekayo kwiqonga lesikere eliqingqiweyo eliqhelekileyo ukuze lenze ukuba kulungele umsebenzi womgca wendibano kunye namanye amashishini ahambelana noko. Ewe kunjalo, ukongeza koku, samkela imiphezulu yeetafile kunye nobukhulu.
Kuxhomekeka kwimfuno eyahlukileyo kumthengi wethu sinokunikela ngoyilo olwahlukileyo kwitafile yethu yokuphakamisa isikere engenza umsebenzi ube lula ngakumbi kwaye kungabikho nawuphi na odidekileyo.Ngcono singenza ubungakanani beqonga elicwangcisiweyo elingaphezulu kwe-6 * 5m nangaphezulu kweetoni ezingama-20.
Iqonga lesikere elisindayo elinomthwalo osisigxina lisetyenziswa ikakhulu kwiindawo zomsebenzi ezinkulu zemigodi, indawo zokwakha ezinkulu, kunye nezikhululo zemithwalo emikhulu Zonke ubukhulu beqonga, amandla kunye nokuphakama kweqonga kufuneka kwenziwe ngokwezifiso.
Itheyibhile yokuphakamisa isikere kabini ilungele umsebenzi kwiindawo eziphakamileyo ezingenakufikelelwa ngetafile enye yokuphakamisa isikere, kwaye inokufakwa emngxunyeni, ukuze itafile yokuphakamisa isikere igcinwe ngokulinganayo nomhlaba kwaye ayisayi kuba Umqobo emhlabeni ngenxa yokuphakama kwawo.
Iimveliso zithunyelwa eYurophu, eMelika, eAfrika nakwamanye amazwe nakwimimandla emininzi. Imakethi yasekhaya isasazeke kwizixeko ezininzi e-China, kwaye iimveliso ziyaqatshelwa kwaye zinconywa ngabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya. Inkampani iqhubeke ngokuthengisa kunye ne-R & D yamacandelo amabini etafile yokunyusa umbane kunye neloli ye-scissor pallet, kwaye yaphuhliswa isisingisa esizisebenzelayo.